မေတ္တာပန်းတို့ လန်းရာမြေ: August 2010
မေတ္တာပန်းတို့ လက်ဆောင်မွန် (၂)
တစ်နေ့တစ်နေ့ကို လာလည်ကြတဲ့ ဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းတွေကလည်းရာနဲ့ချီပြီးရှိနေတော့ မိမိ တို့အနေနဲ့ အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်လေးတွေ မဖြစ်မနေ ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်၊၊တို့တထွေဟာ အလုပ်အရှုပ် ဆုံး လူ သားတွေထဲမှာ ပါဝင်ပါလိမ့်မယ်၊ ဒီကြားထဲမှာ Blog-လေးတွေ တည်ထောင်ပြီး မိမိတို့ တတ် သလောက်၊မှတ်သလောက် ပြန်လည်ဝေငှနေကြတာကို အပြစ်မယူပဲ အပြုသဘောနဲ့ဖတ်ရှု့အာ:ပေး နေကြတာကိုလည်း တဖက်ကကျေးဇူးတင်မိတာအမှန်ပါ။
ယောနိသောမနသိကာရ-အကောင်းမြင်တတ်မှ၊ သင့်တင့်လျှောက်ပတ်စွာ နှလုံးသွင်တတ်မှ ၊ကုသိုလ်ဆိုတာရကြပါတယ်၊ မိမိတို့အဖွဲ့ ရဲ့အတိုင်ပင်ခံ၊ဒေါက်တာရာဟုလာ ဟာလည်း မိမိတိုနှင့် ထပ်ကြပ်မကွာ အားရင် အားသလို ကြည့်ရှု့စစ်ဆေးပေးနေပါသေးတယ်၊၊အချို့ Links လေးတွေဟာ ပညာရှိလူကြီး သူမများ အတွက် ဘာမှ မလိုအပ်ပါသဖြင့် Click လုပ်စရာအကြောင်မရှိပါ၊ တရားသံဝေဂများ ပါရှိရာဆိုက်လေးတွေကို ဝင်ရောက်အားပေးမိဖို့ အထူးတိုက်တွန်းပါတယ်၊
သူသူငါငါ ဘယ်သူမဆို အထက်တန်းကို တက်လှမ်းချင်ကြမှာပါပဲ၊သီအိုရီပိုင်းကိုတော့ မေတ္တာပန်းတို့ လမ်းရာမြေမှာတင်ပြပေးသွားပါမယ်၊၊လက်တွေ့ကျင့်လိုက်တာနဲ့ အကာလိကအခါမလင့် အကျိုးရပါလိမ့် မယ်၊၊ စိတ္တနိယာမ၊စိတ်တွေရဲ့သဘာဝကို လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ စိတ်ဆိုတာပရမတ္ထ-ထာဝရ အမှန် တရား ဖြစ်လေသောကြောင့် ကိုယ်မွေးမြူထားတဲ့၊ကောင်းတဲ့စိတ်ဟာ ကိုယ့်ရဲ့အမှီသဟဲ အားကိုးတရားဖြစ်ပါတယ်၊ မကောင်းတဲ့စိတ်ကို မွေးထားရင် ကိုယ်မွေးတဲ့မျောက် ကိုယ့်ကိုပြန်ကိုက်သလို ကိုယ့်ကိုပြန် နှိပ်စက်ပါလိမ့်မယ်၊ ယခင်ဆောင်ပါးတခုမှာ ပြောခဲ့သလို စိတ်ဆိုတာ မိမိနှလုံးအိမ်ထဲမှာ ကပ်ပြီးတော့ပေါ်လာပြီး၊အဲဒီမှာပဲ ကပ်ပြီးပျက်သွားတယ်၊၊
အဲဒီတော့ ရှေ့ က ကပ်ပြီးပျက်သွားတဲ့ စိတ်နဲ့ တူမျှတဲ့ စိတ်တမျိုးဟာ နောက်ကပ်ပြီးပေါ်လာပြန်တယ်၊အဲဒီစိတ်ချုပ်တာနဲ့ တူတဲ့စိတ်ကပြန်ပေါ်လာပြန်တယ်၊ အဲလိုနဲ့အသက်ရှင် အသေခင်မှာ စိတ်ကောင်း လေးတွေ၊ qualified ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေ ရှေ့ကချုပ်ပေးနေပါမှ နောက်ကကောင်းတဲ့စိတ် quailfied ဖြစ်တဲ့စိတ်လေးတွေကပ်ပြီးတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်၊ အဲဒီခါ စာဖတ်သူဟာ သိပ်ပြီးချမ်းသာတဲ့စိတ်လေးတွေ လှပတဲ့ မေတ္တာပန်းလေးတွေ သင့်ဘဝပန်းခင်းထဲ့မှာဝေဝေဆာဆာ ပွင့်လန်းလာကြလိမ့်မယ်၊ ဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက် အကြောင်းတရားလေးတွေအမြဲဖန်တီးနေဖို့လိုပါတယ်၊ ဒါနပြုနေရမယ်၊သီလဆောက် တည်နေရမယ်၊ တရားစခန်းတွေ တရားပွဲတွေ သွားနေရမယ်၊ အများအကျိုးသယ်ပိုးနေရပါလိမ့်မယ်၊ ဒါမှအဲဒီကောင်းတဲ့စိတ် qualifedbဖြစ်တဲ့စိတ်တွေရှေ့က ချုပ်စေပြီး နောက်ကအရည်အသွေးကောင်း
တဲ့စိတ်တွေ ရရှိပိုင်ဆိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒါကြောင့်မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်ကြီးက သူ့ကျောင်းတိုက်မှာ စိတ်ထားကောင်းဖို့က ပထမ ကျန်တာအားလုံးနောက်မှထားပြီးဆုံးမသွားခဲ့ပါတယ်၊စိတ်ကောင်းဖြစ်ပေါ်လာရင် အပွင့်ဓါတ်၊အလင်းဓါတ်၊ ကံကောင်းတဲ့ဓါတ်တွေ အလိုအလျှောက်ြဖစ်ပေးလာနိုင်တယ်၊ ဒါကြောင့် ကံပွင့်။ လာဘ်ပွင့်၊ စန်းပွင့် ၊ဇာတာပွင့်ဖို့ ဆိုတာ စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ အခါ အကုန်ပွင့်သွားပါတယ်၊ဥပမာလေးတစ်ခု စဉ်းစားကြပါစို့၊ဟို--တစ်ချိန်က တရုပ်ပြည်ကြီးကိုပိတ်ထားလိုက်တာ ဘယ်သူမှအလွယ်တကူသွားလို့မရခဲ့ပါဘူး၊ ရယ်စရာပါ တခါတည်းပြောလိုက်ပါရစေ-တရုပ်မတစ်ယောက်ဟာနိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်နဲ့တွဲသွားနေရင် ရဲက ရောက်လြာ့ပီး စာရွက်စာတမ်းတွေ အထောက်အထားတွေမေးပြီး ခွဲသင့်ရင်ခွဲပေးလိုက်တယ်၊ဒီလိုနဲ တရုပ်ပြည်ကြီးက ဆင်းရဲလွန်းလို့ များစွာသော တရုပ်တွေဟာ ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ Flee လုပ်ကြ တော့တာပဲ၊၊ မကြာခင်ဆယ်စုနှစ်က တရုပ်တွေသဘောပေါက်ပြီး အပွင့်ဝါဒ၊ တံခါးဖွင့်ဝါဒတွေ ကျင့်သုံးလိုက်တဲ့အခါ တရုပ်ပြည်ရဲ့စီးပွားရေးဟာ ကမ္ဘာစီးပွားရေး၊ ကမ္ဘာ့စီးပွား ရေးဟာလည်း တရုပ်ပြည်စီးပွားရေး ဖြစ်လာခဲ့ရပြီး ၊အပွင်ဓါတ်တွေ ဝေဆာလာခဲ့ ရပါတယ်။ အပွင့်ဓာတ် အရေးပါပုံ ကိုပြောချင်တာသက်သက်ပါ။
ရှေ့ ကပွင့်လန်းတဲ့ စိတ်၊အကျိုးစီးပွားရေးကိုဆောင်တဲ့ စိတ်တွေ အဖြစ်များအောင် ကြိုးစားနေရင်း ၄င်းနဲ တူမျှတဲ့ စိတ်တွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီး ချမ်းသာတဲ့ ဘဝတွေမှာ ကျင်လည်ခွင့်ရပါလိမ့်မယ်၊ မိမိရင်ထဲ နှလုံးသားထဲမှာ ရှေ့ ကချုပ်ပျောက်နေကြတဲ့ လောဘစိတ်၊ဒေါသစိတ်နှင့်မောဟစိတ်များသည် နောက်မှာ ၄င်းစိတ်များကိုသာ ပြန်လည်မွေးဖွားစေမည်ဖြစ်တာမို့ ဆင်းရင်း ဒုက္ခဝေနေပေဦးမည်။
ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေ လာယူကျင့်ကြံဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်၊တရားထိုင်မယ်ဆိုရင် ပူပင် သောက တွေ၊ကြေကွဲဝမ်းနည်းမှုတွေနဲ့တရားမမှတ်သင့်ပါ၊ ဘုရားအာရုံ၊တရားအာရုံ၊သံဃာအာရုံ၊မိဘ၊ဆရာ သမား အာရုံ-တို့ ကိုစိတ်အစဉ်ဝယ် ထင်အောင်ယူပြီး နှာသီးဖျားမှာစိတ်ကို ကပ်ထားပါ၊
ပြင်မရှုန၊ဲ့လုပ်မရှုနဲ့၊ဝင်လေသည်တိုးပြီးဝင်လာလိမ့်မယ်၊အေးတဲ့သဘောရှိတဲ့ဝင်လေသည် တိုက်ပြီးဝင်သွား ပါလိမ့်မယ်၊၊မကြာခင်မှာနွေးတဲ့သဘောရှိတဲ့ထွက်လေသည် နှာသီးဖျားကိုတိုက်ပြီးထွက် သွားပါ လိမ့်မယ်၊ဒီလိုထင်ရှားတဲ့သဘောတရားတွေကို စူးစိုက်တဲ့သတိဖြင့်ဝိရီယစိုက်ကာ မလွတ်တန်းမှတ် နေရပါလိမ့်မယ်၊ အဲဒီအခါ ခန္ဓာကတရားတွေ အလိုအလျှောက် ပြလာပါလိမ့်မယ်၊ခန္ဓာနဲ့ဆက်စပ်သမျှ ပေါ်ရာထင်ရှားရာသဘောကို ရုပ်လို့ခေါ်ပါတယ်၊ စိတ်နဲ့ဆက်စပ်သမျှကို နာမ်လို့ခေါ်ပါတယ်၊ ရုပ်သည်အစိုးမရ အနတ္တ သဘော-နာမ်သည်လည်းအစိုးမရအနတ္တ သဘောဖြစ်ကြောင်း သဘောပေါက် သိလာပါလိမ့်မယ်၊။
ပထမပြောခဲ့သလို ရှေ့ကချုပ်သွားတဲ့ တူမျှတဲ့စိတ်တွေ နောက်ကကပ်ပြီးပေါ်တယ်၊လောဘနဲ့ချုပ် ရင်လောဘနဲ့ပေါ်မယ်၊ဒေါသနဲ့ချုပ်ရင်ဒေါသနဲ့ပေါ်မယ်၊မောဟနဲ့ချုပ်ရင်မောဟနဲ့ပေါ်မယ်ဆိုတာ လေးတွေ ကို သိမြင်လာတဲ့အခါမှာယောဂီတစ်ဦးအနေနဲ့ အမှန်တရားတွေမြင်လာပါလိမ့်မယ်။
ဒီဘဝနောက်ဆုံးချုပ်တဲ့စိတ်ဟာ လောဘနဲ့သာ အဆုံးသတ်ချုပ်သွားရင် ဘာဖြစ်သွားမလဲ၊? လောဘရဲ ပေးနိုင်တဲ့အကျိုးကပြိတ္တာဘဝရောက်သွားနိုင်ပါတယ်၊ဒီဘဝနောက်ဆုံးချုပ်တဲ့စိတ်ဟာဒေါသနဲ့အဆုံးသတ်ရင် အခြားမရှိသောဘဝမှာ ဒေါသအကျိုးပေးတဲ့ ဘဝက ငရဲပဲဖြစ်ပါ လိမ့်မယ်၊ ဒီဘဝနောက်ဆုံးချုပ်တဲ့ စိတ်က မောဟနဲ့ချုပ်ရင် မောဟပဋိသန္ဓေဖြစ်တဲ့ တိရိစ္ဆာန်ဘဝကိုပဲ ရောက်ပါလိမ့်မယ်။။အဲဒီတော့ ဒို့ ဆွေတော် မျိုးတော်အားလုံး Clementi ကျောင်းမှာ သစ္စာ လမ်းပြ ၀ိပဿနာ တရားတော်များကို ထိထိရောက်ရောက် သင်ကြားလျှက် ရှိပါတယ်။ မနက်ဖန် လာရောက် စမ်းကြည့်နိုင်ပါကြောင်း နိုးဆော်အပ်ပါသည်။
နီပွန်တို့ ဌာနီ ဂျပန်ပြည်
(Dr Rahula donated Y$10000 to အိုဆုခကျောင်း,တိုကျိုမြို့)
ဟိုအတိတ်တစ်ချိန်က မိမိဒေသမှာ နီပွန်တွေ(၃)နှစ်လောက်နေသွားခဲ့တာကိုတော့ ငယ်ငယ်ကတည်းက ဘိုးဘွားတွေဆီမှတဆင့််နီပွန်တွေအကြောင်းခဏခဏကြားခဲ့ဖူးပါတယ်-သူတို့ဟာသိပ်ရဲရင့်ပြီး ရက်စက် တယ်၊ အင်္ဂလိပ်ခေါ်လာတဲ အိန္ဒိယကုလားတပ်တွေအပေါ်အနိုင်ယူပုံတွေ၊ ဘာပဲ ချက်ချက် သကြားနဲ့ပဲချက်တာပဲ၊ အချို့ရွာတွေမှာတော့သူတို့နဲ့နီးစပ်ပြီးစစ်ရှုံးလို့ပြန်လာတဲ့အခါ လွမ်းဆွေးကျန်ရစ်ကြ တဲ့အပျိုလေးတွေကို ကာလသားတွေက နောက်ပြောင်ကြကြောင်း ကြားဖူးခဲ့ပါတယ်၊ဒါပေမဲ့နီပွန်တို့ဌာ နေကိုရောက်လိမ့်မယ်စိတ်မကူးခဲ့ ပါဘူး။ မကြာခင်ကတော့ အကြောင်းအကျိုးတိုက်ဆိုင်လို့နီပွန်တို့ဌာနေဂျပန်ပြည်ကို ရောက်ခဲ့ရပါတယ်၊TG-စီးရင်ကောင်းမလား၊နီပွန်အဲယားလိုင်းစီးရင်ကောင်းမလားစဉ်းစားယင်း၊နီပွန်ပြည်သွားရင် နီပွန်အဲယား လိုင်းစီးတာ ပိုကောင်းတယ် ဆိုပြီး အဲဒါကိုပဲရွေးလိုက်ပါတယ်၊၊ သူတို့ လေယဉ်က အပြာရောင်လိုင်းလေ-ခပ်သန့်သန့်ှင့်ဒီဇိုင်းလေး ဆင်ထားတော့မြင်ရတာ-Fresh-ဖြစ်ပါတယ်၊ မိမိလည်းFresh ဖြစ်တဲ့အ ရောင်ကိုကြိုက်တာဆိုတော့ ဒီဘလော့စ်အရောင်ရွေးတာကအစ သတိထားမိကြမှာပါ၊
မိမိက လေယဉ်အကြာကြီးစီးရတာ ငြိမ်းငွေပါတယ်၊M.A-တွေ ပါရဂူတန်းတွေအတွက် ကုလားပြည်တွေကို အကြိမ်များစွာသွားခဲ့ရပါတယ်၊ မိမိပါရဂူဘွဲ့ရတဲ့နေရာ ၊ဘုံဘေ-ဒေသ ဆိုတာလည်း စင်ကာပူက အတော်ဝေးပါတယ်၊ စင်္ကာပူဘက်က သွားရတာမဆိုးသေးပါဘူး ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စင်္ကာပူနဲ့အိန္ဒိယ ကွားခြားချိန်က ၂-နာရီ-၃၀-မိနစ် ဆိုတော့၊လေယဉ်ပျံချိန် ၅-နာရီ ၃၀-လောက်ကြာပေမဲ့ သိပ်မကြာလိုက်သလိုခံစားရတယ်။ ဒါပေမဲ့ဘုံဘေကနေ စင်္ကာပူပြန်ရင် လေယဉ်ပျံသန်းချိန်က ၅-နာရီကျော် အပြင်၊ နာရီကွာခြားချက် ၂-နာရီ-၃၀-ပေါင်းလိုက်တော့(၈)-နာရီလောက်ကြာပါတယ်၊
မိမိအိန္ဒိယတက္ကသိုလ်က နေညနေ၃-နာရီလောက်မှာ စတင်ထွက်ခွါလေ့ရှိရာ ဘုံဘေကိုရောက်တော့ နာရီအနည်းငယ်စောင့်ရပါတယ်ညည့်သံခေါင်ယံမှာ လေယာဉ်ကြီး စတင်ပျံသန်းရာ နောက်နေ့ မနက် ၈-နာရီလောက်မှာစင်္ကာပူ ချန်ဂီလေဆိပ်ကို ရောက်လာခဲ့ ရ ပါတယ်၊
ဒီထက် ဂျပန်ပြည်သွားရတာ ပိုပြီးဝေးပါတယ်၊ စင်္ကာပူနဲ့စံတော်ချိန်ကွာခြားမှု့ကတော့(၁)နာရီပါပဲ ၊ကောင်းကံမှာတော့(၇)နာရီကျော်ကြာပါတယ်၊ နံနက်-၉-နာရီလောက်မှာ နီပွန်တို့ ဌာနေ ဂျပန်ပြည်မှ-နာရီတာ လေဆိပ်ကိုရောက်သွားခဲ့ ပါတယ်။
မိမိတို့ ရဲ့ အန္တမေတ္တာအဖွဲ့ မှ ကိုဝင်းမောင်တို့ မိသားစုက လာကြိုကြပါတယ်၊ ဂျပန်တွေဟာထုံးစံ အတိုင်းပါပဲ ပျူငှါပါတယ်၊ Immigration-အရာရှိရှေ့မှာ ခရီးသည်တွေကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနေတာ က မြန်မာစတိုင်လိုမျိုးပါပဲ၊ အရာရှိနဲ့ တွေ့ တဲ့ အခါ မိမိက မြန်မာဆိုတော့ဘာလုပ်ဖို့လာတာလဲ ပေါ့၊ ခေါ်တဲ့သူ ဘယ်သူလဲပေါ့ စသဖြင့် အင်တာပျူးခန်း သွားဝင်ထိုင်ရပါတယ်၊ အပြင်ကစောင့်နေတဲ့ အနန္တမေတ္တာကိုဝင်းမောင်ကို မင်းတို့ခရီးသည်တွေ့တယ်၊ ဂိတ်ပေါက်ကစောင့်နေပါ၊ ဒို့လာပို့မယ်စသည်ဖြင့်ဂျပန်လို
ပြောလိုက်ပါတယ်-မိမိကလဲ ကိုယ်တတ် ထားတဲ့ဂျပန်စကားလေးနဲ့ (အရိဂတိုး ကိုဇိုင်း မ(စ်)-မင်္ဂလာပါ။-ဒိုးဇို ယိုရို ရှိကု-တွေ့ ရတာ ၀မ်းသာလှပါတယ်။)--စသည်ဖြင့် တွေ့သမျှ ဂျပန်တွေကို နှုပ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်၊ အအေးပိုင်းဒေသဆိုတော့ လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ လန်းဆန်းတက်ကြွနေကြပါတယ်၊ အဝတ်အစားကောင်း
ကောင်း တွေဝတ်ဆင်တတ်ကြပြီး လည်မှာ ပုဝါလည်းစီးဦးထုပ်လေးတွေ ဆောင်းထားကြပါတယ်၊နာရီ တာလေဆိပ်နဲ့တိုကျိုက အတော်လေးလှမ်းသေးတော့FerryBus တစ်နာရီနီးပါးလောက်စီးရပါ သေးတယ်၊တိုဂျိုကိုရောက်သွားတဲ့အခါ အရာရာတိုင်းဟာသပ်ရပ်လှပပါတယ်၊ စင်္ကာပူလောက်တော့ မသပ်ရပ်ပါဘူး ၊အရာရာတိုင်းဟာ ကြာနေတာရယ် ကျယ်ပြန်တဲ့မြို့ရွာတွေ ဖြစ်နေပြန်တော့ လက်မလယ်နိုင်ပါဘူး၊ သူတို့Taxi တွေလည်း မလှပါဘူး ၊တက်ရင်တော့ယန်း ၇၂၀-ကစပါတယ်၊ ဒါဟာ s$ 10-ဝန်းကျင်နဲ့ ညီမျှပါတယ်၊ အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ကမရပါ၊ MRTတွေလည်းလျပ်စစ်ဓါတ် ကြိုးနဲ့ ချိတ်ပြီးသွားနေကြတာဆိုတော့ဓါတ်ကြိုးတွေနဲ့ပဲရှိနေပါတယ်၊ station တွေကလည်း နှစ်တွေ ကြာခဲ့ပြီဆိုတော့ဟောင်းနွမ်းကုန်ကြပါပြီ ၊စင်္ကာပူကMRTတွေကလွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်ကစတင်ခဲ့တာ
ခုနှစ်ခါလဲရင် ရှစ်ခါထမယ်..။ရှစ်ခါလဲရင် ကိုးခါထမယ်..။အကြိမ်တစ်ရာလဲရင် တစ်ရာ့တစ်ကြိမ်ထမယ်..။
“ ခုနှစ်ခါလဲရင် ရှစ်ခါထမယ်..။ ”(ဆက်ရန်)
မေတ္တာပန်းတို့ လက်ဆောင်မွန် (၁)
မေတ္တာပန်းတို့ လန်းရာမြေကို အလည်ရောက်လာတဲ့ချစ်မိတ်ဆွေအတွက် အကျိုးရှိမယ့်လက်ဆောင် လေး တွေအမြဲပေးချင် ပေမဲ့ ကိစ္စ များမြောင်လူတို့ ဘောင်မှာ နေ့ စဉ် စီမံ ဆောင်ရွက်ရတဲ့ ကိစ္စကြီးငယ်အသွယ် သွယ် ကလည်းများလွန်း တာကြောင့် အားလပ်တဲ့ အခါတိုင်းမှာတော့ဒီလိုပဲ အကျိုးများတာလေးတွေ ပေး အပ်သွားပါ့မယ်၊
သက်ရှိ သတ္တဝါတွေရဲ့ ခန္ဓာအစဉ်မှာ စိတ်ဆိုတဲ့Energy တစ်ခုက ခြယ်လှယ်စိုးမိုးနေပါတယ်၊လူအများထင်သလို အတ္တလိပ်ပြာ ဝိညာဏ်တော့ မဟုတ်ပါ လျှပ်တပြက် မျက်တောင်တစ်ခတ်မှာကုဋေ ပေါင်း တစ်သိန်းလောက် ကပ်ပေါ်ပြီး ကပ်ပျက်သွားတဲ့ ဓါတ်သဘော သဘာဝတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အတ္တ လိပ်ပြာ ဝိညာဏ်လို့ ခေါ်စရာ၊ကိုင်ပြစရာ၊ ညွန်ပြစရာ၊ သက်တမ်းက တစ်စက္ကန့် မျှမရှိပါ။ဒါပေမဲ့ဒီ Energy ကပဲ ဘဝတစ်ခုလုံးကို လွမ်းမိုးနေပါတယ်၊ ဒီစိတ်ကို ကာယကံရှင်ကပဲ မွေးဖွားပေးရပါတယ်၊ ပဌာန်းဒေသနာတော်မှာ ဟောကြားထားတဲ့ မျက်စိနှင့်အဆင်းပေါင်းစပ်ထိတွေ့ တော့ မြင်စိတ်ဆိုတာ ပေါ်လာတယ် ၊နားနှင့်အသံနဲ့ ပေါင်းစပ်တော့ ကြားစိတ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်၊စသည်ဖြင့်လေ့ လာရတာလွယ်ပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီတော့ စိတ်ကောင်းတစ်ချက် ကပ်ပြီးပေါ်သွားတာနဲ့ဆက်တိုက် ကုဋေတစ်သိန်းလောက်ကဆင့်ပွား ပေါက်ဖွား သွားတော့ တာပါပဲ၊ ဒီစိတ်တွေဟာ တနေ့ တနေ့ ကို မရေမတွက်နိုင်အောင် တစ်ဦးတစ်ယောက် စီရဲ့ခန္ဓာအစဉ်မှာ ပေါ်ပေါက်လေ့ရှိပါတယ်၊ ပေါက်ဖွားပြီးတာနဲ့ပြီးသွားပြီမထင်ပါနဲ့ခန္ဓာထဲမှာ စိတ္တဇ ရုပ်ဆိုတဲ့စွမ်းရည်တစ်မျိုးကိုထုပ်လုပ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ရှိဝါယောဓါတ်နှင့်ပေါင်းထည့်ကာရုပ်သေးနှင့် တူသော သတ္တဝါတွေကို ခိုင်းစေတော့ တာပါပဲ၊သာမန်နဲ့ ထိန်းချုပ်လို့ ရဖို့က လွယ်မယ်မထင်ပါနဲ့လောက ကြီးမှာသူ့ထက်အားကြီးတဲ့ စွမ်းရည်ဟာ နောက်ထပ်ဘာမှ ရှိမှာမဟုတ်တော့ ပါ။ ''စိတ္တံ နီယတိလောကော၊ စိတ်သာရှင်စောဘုရားဟော၊ လောကကြီးကို စိတ်က ဦးဆောင်နေတာပါ၊ စိတ်ချမ်းသာအောင်နေရမယ၊် စိတ်မပူပါနဲ၊့ ဖြစ်ချင်တာဖြစ် စိတ်မညစ်နဲ့၊ တောင်တွေး မြောက်တွေး စိတ်မလေးနဲ့၊ တောင်ကြံ မြောက်ကြံ စိတ်မပူပန်နဲ၊့ ကိုယ့်ထိုက်နဲ့ကိုယ်ကံ ကိုယ်သာစံရမည်၊ ကိုယ်သာခံရမယ်' စသည်ဖြင့်ပြောပြလို့ မကုန်နိုင်တဲ့ စိတ်အကြောင်းတွေပါပဲ။
ဥပမာ-မိမိရဲ့ချစ်ခင်တဲ့ သူတစ်ယောက်၊ မေတ္တရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ဟာ အင်မတန်ဝေးတဲ့ စင်ကာပူကTampanies, Pasaris မှာနေတယ်ဆိုပါတော့၊ အဲဒီကို မကြာမကြာရောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ၊အဲဒီသွားချင်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကသူ့ကိုမကြာမကြာကြံဖန်ပြီးရောက်ပြီးယင်း ရောက်သွား အောင်ခေါ်သွား ပါလိမ့်မယ၊် ဒီလိုပဲ ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုတွေး တောကြံစည် တတ်တဲ့သူ၊ ကောင်းတာကို ဝါသနာပါတဲ့သူဟာ ကောင်းတာလေးတွေကို လုပ်ဖြစ်ပြီး ကြီးပွားချမ်းသာနေလိမ့်မယ၊်၊ မကောင်းတဲ့ စိတ်ကိုထားပြီး မကောင်းတာတွေ တွေးတတ်၊ လုပ်တတ်ရင်တော့ သူ့ဆီမှာ မကောင်းတဲ၊့ ဆင်းရဲတဲ့ စိတ်တွေပဲ ပေါက်ဖွားနေပြီး ဒုက္ခပင်လယ် ဝေနေပေလိမ့်မယ် ၊မျက်နှာမှာလည်း အတွင်းစိတ်က ပြနေပေလိမ့်မယ်၊၊ ဒီကိစ္စကို ကိုယ်သာလျင် ပြင်လို့ ရပါလိမ့်မယ၊် မိမိကိုယ်စား ဘယ်သူမှကူလုပ်ပေးလို့ မရလောက်ပါ၊၊ဒါကြောင့်စိတ်ကောင်းထားဖို့ ၊ အများအကျိုးသယ်ပိုးဖို့ အမြဲတမ်း သတိပေးလေ့ ရှိကြပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ နေထိုင်ခွင့်ရတဲ့ အခါ ဒီ Skill or Quality ကို လေ့ ကျင့်တတ်ရင် ပိုပြီး အကျိုးများပါတယ်။
ဥပမာ-စုပေါင်းနေကြတဲ့ အလုပ်သမားတွေဖြစ်ရင် အများနှင့်ဆက်စပ်တဲ့နေရာလေးတွေကို သန့်ရှင်း ရေးလုပ်တာတို၊့ အများသုံးလို့ရနိုင်တဲ့သွားတိုက်ဆေး၊ခံတွင်းငုံဆေး ၊လက်ဆေးဆပ်ပြာ စသည်ကို နေရာ တကျလှူထားပေးတာတို့၊ရေချိုးယင်းရေချိုးခန်းနံရံလေးတွေကို တိုက်ချွတ်ပေးတာတိ၊ု့ လက်ဆေး "ဘေဇင်" လေးတွေ သန့်ရှင်းထားခဲ့တာတို၊့ မီးဖိုလေးတွေပယ်ကျံနေရင် စတီးတိုက်ဖတ်လေးနဲ့ပြောင်လက် သွားအောင်တိုက်ပစ်လိုက်တာတွေဟာ စိတ်ကောင်းများစွာကို မိမိခန္ဓာအစဉ်မှာကုဋေ ပေါင်းများစွာ ဖြစ် ပေါ် ခွင့်ပေးလိုက်တာပါပဲ။
ဒီစိတ်ကိုအငယ်တန်းလောက်ပဲမွေးထားရင်အငယ်တန်းဘ၀နဲပဲနေကြရမှာဖြစ်ပြီး၊ အလတ်တန်းကိုမြှင့်တင် လိုက်တဲ့အခါဘ၀အလတ်တန်းကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်၊၊ တကယ်သာ အထက်တန်းစိတ်ကိုမွေးနိုင်ရင်တော့ ဘ၀အထက်တန်းကို တက်သွားတော့ပါပဲ။ (ဆက်ရန်)
ကင်ဆာဘေးဆိုးကို ကာကွယ်နိုင်မယ့် အသီးအနှံ ( ၁၀ ) မျိုး ( ၁ ) ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းနှင့် ဂေါ်ဖီထုပ်ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၊ ဂေါ်ဖီထုပ်၊ Brussel (ကွမ်းသီးဂေါ်ဖီထုပ်)၊ပဲပင်ပေါက်၊ပန်းဂေါ်ဖီ၊ ကိုက်လန်၊ မုန်ညင်းမက်စေ့ စားမြန်ရည်နှင့် မုန်လာဥစသည်တို့ဖြစ်ပါသည်၊အဲဒီဟင်းသီဟင်းရွက်တွေထဲက ကင်ဆာကိုတိုက်ခိုက် ပေး နိုင်မဲ့ ဓာတ်သဘာဝပစ္စည်းတွေ အများအပြား ပါဝင်နေခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေထဲက ရရှိမယ့် အင်ဇိုင်းတွေကပဲ ကင်ဆာဖြစ်စေမယ့်ကာစီနိုဂျင်တွေကို ပယ်ဖျက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
( ၂ ) မုန်လာဥ-၀ါဆေးလိပ်သောက်သုံးသူတွေ ဖြစ်လာတတ်မယ့် ကင်ဆာရောဂါကို မုန်လာဥ၀ါ တနေ့တလုံးမှန်မှန်စားပေးနိုင်ရုံနဲ့ ရောဂါလျော့ပါးလာနိုင်ပါမယ်၊ မုန်လာဥ၀ါဟာစိတ်ပင်ပန်းမှု၊ ပန်းနာရောဂါဖြစ်မှု၊ ဖျဉ်းရောဂါစွဲမှုနဲ့ အသားအရေဓာတ်ဖောက်မှုတို့ကိုပါ ကာကွယ်ပေးပါတယ်၊ ရောဂါမြင့်မားရင်လည်းချုံ့ပေးတတ်ပါတယ်၊ မုန်လာဥ၀ါထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ Betacarotene ဓာတ်သဘာဝဟာသွေးထဲက ကိုလက်စထရောတွေကိုတောင် ဖိချပေးပြီး အူမကင်ဆာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာအမျိုးမျိုးကို ဖြေရှင်းပေးတတ်ပါတယ်။
သို့သော် သတိပြုဖို့မှာ ဘယ်လိုပဲ မုန်လဥ၀ါနှင့် ကာကွယ်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေမယ့်လည်း ဆေးလိပ် စီးကရက် တွေကို ဆက်လက်ပြီးသဲကြီးမဲကြီးဖွာရှိုက်နေရင်တော့ဓာတ်သဘာဝရဲ့ထက်မြက်တဲ့အာနိသင်ကိုကောင်းစွာ ခံယူရရှိနိုင်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ပူစပ်ပူရှိန်းရှိလှတဲ့ ငရုတ်၊ ငရုတ်ကောင်းစေ့တို့ထဲမှာCapsaicinလို့ခေါ်တဲ့ ဓာတ်သဘာဝပစ္စည်းတွေ ပါရှိပါတယ်၊ ဒီပစ္စည်းတွေဟာဆေးလိပ်အသောက်များမှု၊ အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်မယ့် ဘေးရန်ကို ကာကွယ်ပေးတတ်ပါမယ်၊ထို့ပြင်လည်း ပင်ပန်းမှုဗဟိုမှာ နာကျင်ကိုက်ခဲမှုဖြစ်တတ်မယ့် သဘာဝအကြောင်းတွေကိုပါ ပယ်ဖျက်ပေးခဲ့ ပါတယ်၊ Capsaicinဓာတ်ဟာ ကိုက်ခဲမှုကိုကာကွယ်ပေးမယ့် သဘာဝလည်း ရှိနေပါတယ်၊ ငရုတ်ကောင်းဟာ သလိပ်ပျောက်စေတယ်၊ချောင်းဆိုးရင်ကျပ် သက်သာစေတယ်၊ ပြီးတော့ သွေးထဲက ခဲကျပ်မှုတွေကိုလည်း အရည်ပျော်စေတတ်တယ်။
သဘာဝအင်ဇိုင်းတွေပါဝင်ပြီး ကင်ဆာဆဲလ်တွေ မျိုးပျံ့အောင် ဆောင်ကြဉ်းနေတဲ့ကာစီနိုဂျင်တွေကို ဖယ်ရှား နိုင်တဲ့ ဓာတ်သဘာဝတွေဟာ ရှောက်တို့၊သံပရာတို့ထဲမှာ ပျော်ဝင်စွာ တည်ရှိနေခဲ့ပါတယ်၊ Limoneneလို့ ခေါ်တဲ့ဓာတ်သဘာဝတွေဟာ ကင်ဆာကို တိုက်ဖျက်နိုင်မယ့် အင်ဇင်းတွေကိုမြှင့်တင်ပေးပါတယ်၊ ရှောက်နှင့် သံပရာတို့ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ Glucaraseဓာတ်တွေကလဲ ကင်ဆာဖွဲ့စည်းစေမယ့် အကြောင်းတွေကို အရှိန်အဟုန်နဲ့ချေဖျက်ပေးလေ့ ရှိခဲ့တယ်၊ Limonene ဓာတ်တွေ ပျော်ဝင်နေတဲ့အထဲမှာတရုတ်နံနံ၊ ဖာလာ၊ ကရဝေးနှင့် စမုန်နက်တို့လည်း ပါဝင်နေပါတယ်။
( ၅ ) ကြက်သွန်ဖြူ နှင့် ကြက်သွန်နီ
Allium ကွန်ပေါင်းတွေဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်း ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီတို့ဟာစူးရှတဲ့ အနံ့အရသာပစ္စည်းအဖြစ်နဲ့ တည်ရှိခဲ့တာဟာ တမူထူးခြားနေခဲ့ပါတယ်၊
ကြက်သွန်ဖြူနီတို့ဟာ အင်ဇိုင်းတွေကို မြင့်တင်ပေးခဲ့တာနဲ့ အမျှပဲကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ ကာစီနိုဂျင်တွေကို ချေဖျက်ပေးပါတယ်၊ကြက်သွန်ဖြူ၊ကြက်သွန်နီတို့အပြင်ကြက်သွန်မြိတ်နဲ့ဟင်းခတ်ကြက်သွန်မြိတ်တို့ကလည်း
စပျစ်သီးထဲမှာ ကင်ဆာတိုက်ဖျက်တဲ့ အင်ဇိုင်းတွေကို ထုတ်လုပ်ပေးမယ့်Ellagic အက်ဆစ်တွေနဲ့ ပြည့်သိပ်နေခဲ့ ပါတယ်၊ ပန်းသီး၊ စတော်ဘယ်ရီသီးနှင့်ရတ်စဘယ်ရီသီးတို့ထဲမှာလည်း အသုံးဝင်လှမယ့် အက်ဆစ်တွေ ပျော်ဝင်နေပါတယ်၊Phenol လို ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်မှု သဘာဝဆောင်ယူရာ လူတွေအတွက် အလွန်အဖိုးတန်လှမယ့်ဓာတ်တွေ စပျစ်သီးထဲမှာ ပြည့်ဝနေတာကြောင့်လည်း လူကိုဒုက္ခပေးမယ့်သွေးခဲမှုတွေကို အရည်ဖျော်ချ စေနိုင်ခဲ့ပါတယ်၊ အထူးသဖြင့်အဆိုးကိုလက်စထရော (LDL)တွေကို ဖြစ်ပါတယ်။
ကင်ဆာကို ကာကွယ်နိုင်မယ့် အသီးအနှံတွေကို လေ့လာခဲ့ရာမှာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိမ်းတို့လို ထက်မြက်တဲ့ ဖရဲသီးတို့ သခွားသီးတို့ကိုပါမြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်၊ ဖရဲသီး၊ သခွားသီးတို့ထဲမှာ ပြည့်ဝတဲ့ဓာတ်ကတော့Carotenoids နှင့် Cantaloupes တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်၊ ကင်ဆာကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ ဓာတ်သဘာဝ ကွန်ပေါင်းတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်၊
တရုတ်ပြည်မှာတော့ ကတိုးသခွားဟာ အသည်းရောင် ရောဂါ၊ ကင်ဆာနှင့်မိန်းမသားတွေ ဓမ္မတာထိန်းညှိဖို့ရာ ကိစ္စတွေမှာ အသုံးချရမယ့်ဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်းတခု ဖြစ်နေပါတယ်၊ ကြက်သွန်နီ ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ဂျင်းတို့လိုပဲAdenosineခေါ်သွေးခဲမှုကိုအရည်ပျော်စေတဲ့သဘာဝကောင်းတွေပါဝင်နေတာကြောင့်နှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါတွေကုစားရာမှာပါဆက်စပ်သုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။
ကင်ဆာဆဲလ်တွေ မျိုးပွားအောင် ပံ့ပိုးနေတဲ့ သွေးတွေကို ဖြတ်တောက်ပေးရာမှာပဲပိစပ်ဟာ အသုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်း တခုလို ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်၊ ပဲပိစပ်ပဲတို့ထဲမှာGenistien ဓာတ်သဘာဝတွေ ပြည့်ဝစွာ ပါဝင်နေတာကြောင့်လည်းကင်ဆာရောဂါမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ရာမှာ ထူးထူးခြားခြား အသုံးဝင်နေပါတယ်၊ပဲပိစပ်ဟာ အမျိုးသမီးတွေ မတော်တဆ ကြုံဆုံလာနိုင်တတ်မယ့် ရင်သားကင်ဆာနှင့်သားအိမ်ကင်ဆာတို့ကိုစွန့်စားမှုကြီးမဖြစ်စေအောင် ဖြေလျှော့ပေးတတ်ပါမယ်၊ Genistien ဓာတ်ဟာ အမျိုးသမီးတွေကို အကျိုးပြုတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာထဲက ထုတ်လုပ်ရာအီစထရိုဂျင် ဓာတ်သဘာဝတွေနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်တူပါတယ်၊ ပဲပိစပ်ကိုအဲဒီဟော်မုန်းအဖြစ် ပြောင်းလဲရယူနိုင် ပါမယ်၊ တိုဟူး၊ ပဲကျပ်ပျဉ်၊ ပဲနို့စသည်တို့ထဲမှာ Genistien ဓာတ် အပြည့်အ၀ ပါရှိပါတယ်၊ မြေပဲ၊လူဆန်ပဲပင်နှင့် ဒေါက်ခွရွက်တို့ထဲမှာလည်း အဲဒီဓာတ်သဘာဝတွေ တည်ရှိပါတယ်။
လက်ဖက်ရွက်၊ အထူးသဖြင့် ဂရင်းတီး လက်ဖက်ထဲမှာ လူကိုအကျိုးပြုရာရောဂါတိုက်ဖျက်ပြီး ကျန်းမာမှုတိုးမြှင့် စေမယ့် Polyphenols ဓာတ်တွေပါဝင်နေပါတယ်၊ အကယ်၍ ပုံမှန်ဆဲလ်တွေကနေ ကင်ဆာဆဲလ်အဖြစ် ကူးပြောင်းပြီးဆက်လက်ပွားတိုးလာတော့မယ့် အခါတွေမှာ Catechin ခေါ် ပိုလီဖီနောလ် ဓာတ်သဘာဝတွေကပဲ မပြန့်ပွားအောင် တားဆီးကာကွယ်ပေးတတ်ပါတယ်၊ ကင်ဆာအဖြစ်ဖွဲ့စည်းပေးတော့မယ့် ကာစီနိုဂျင် တွေကိုလည်း တိုက်ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်၊ဂရင်းတီးကို သောက်စရာအအေးအဖြစ် ဖန်တီးသောက်ခဲ့ရင် အာနိသင် ပိုထက်မြက်နိုင်ပါမယ်။
လူကို ရောဂါတိုးပွားအောင် ဖန်တီးနေမယ့် ပိုယ်ထဲက ဖရီးရယ်ဒီကယ်အညစ်တွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်မယ့် ဗီတာမင်စီဓာတ်ဟာ ခရမ်းချဉ်သီးထဲမှာအများဆုံး ပျော်ဝင်နေတတ်ပါမယ်၊ ဗီတာမင်စီဟာ အသီးအရွက် အတော်များများမှာပါဝင်နေပေမယ့် ခရမ်းချဉ်သီးမှာ ထူးခြားတာတခုက Lycopene အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်တယ်၊ ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ နိုက်ထရစ်အက်ဆစ်တွေကို ဖယ်ရှားစေမယ့်Pcoumaslic အက်ဆစ်နှင့် Chlorogenic အက်ဆစ်တို့လည်း ခရမ်းချဉ်သီးနီနီထဲမှာ ပြည့်ဝစွာတည်ရှိနေပါတယ်၊ အလားတူ အဲဒီသဘာဝတွေကို ဖရဲသီး၊စတော်ဘယ်ရီနဲ့ မုန်လာဥ၀ါ တို့ထဲမှာလည်း တွေ့နိုင်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော့် email ထဲရောက်လာတဲ့စာလေးပါ။လူတွေအတွက်အကျိုးအရမ်းရှိလို့ထပ်ဆင့်မျှဝေ
အောင်ပြည့်စုံအေး Posted by
ဂျပန်မှာ ထင်ရှားတဲ့ ကာမာကူရဘုရား (Kamakura Daibutsu)
Amida Buddhaအမိတာဘာ= အမိတ(အနှိုင်းဆမရှိသော)+အာဘာ(ပညာအရောင်ရှိတော်မူသော ဘုရား)
ဘုရားအာရုံပြုပြီး ခုံတန်းရှည်တစ်ခုမှာထိုင်ရင်း ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ပြန်ပြီးသတိပေးရပါတယ်။ ငါကုသိုလ်ပြုဖို့ ဘုရားလာတာ၊ အကုသိုလ်မဖြစ်စေနဲ့ လို့ဆင်ခြင်နေလို့ မှ မဆုံးသေးဘူး။ မြင်ကွင်းထဲကို မတော်တာက ထပ်ဝင်လာပြန်ပါရောဗျား...။ ကျွန်တော်လည်း အဲဒီမြင်ကွင်းကို ကြည့်ရင်း ငါဒီအကြောင်းတော့ ပို့ စ်ရေးတော့မယ်လို့ခေါင်းထဲအကြံရသွားပြီး သက်သေခံအဖြစ် ဓါတ်ပုံရိုက်ယူထားလိုက်တော့မယ်လို့ စိတ်ကူးရသွားပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကင်မရာလည်း မပါတော့ ပါတဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းထုတ်ပြီး ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းတင်လိုက်တော့တယ်ခင်ဗျာ။မြင်ကွင်းကတော့ အနောက်တိုင်းသူမ နှစ်ယောက်၊ ဘုရားဆင်းတုတော်အောက်က အုတ်ဘောင်ပေါ်မှာ ကို့ ယို့ ကားယားပက်လက်လှန်ပြီး အိပ်ချလိုက်လို့ ပါဘဲ။ သူတို့ ဝတ်ထားတဲ့ အ၀တ်အစားတွေနှင့် သူတို့ အိပ်လိုက်ပုံနဲ့ က ဘုရားကြီးရှေ့ မှာ ကျွန်တော် ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာတစ်ယောက်မျက်စိနှင့် ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေဘူးဗျာ။ သူတို့ ကလည်း ဘာစိတ်ကူးပေါက်ပြီးများ အိပ်လဲမသိ။ အကြာကြီးဘဲ။ ပထမ ကျွန်တော်က မသိမသာအဝေးကြီးကနေ ဓါတ်ပုံရိုက်တယ်။ နောက်တော့ မထူးဘူးကွာဆိုပြီး စိတ်ထဲတင်းတင်းရှိတာနဲ့သူတို့ အနားသွားပြီးတော့ကို ရိုက်လိုက်တော့တယ်။ နောက်တော့ တစ်ယောက်ကထသွားတယ်။ ကျန်တဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ တော်တော်ကြီးကြာမှ ထသွားတယ်။
ဒီပို့ စ်ကို ကျွန်တော်ရေးတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတစ်ခုလို့အများသိထားကြတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုမှာရှိတဲ့ အထင်ကရ ကမ္ဘာကျော် ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်ကြီးအပေါ် သူတို့ နိုင်ငံသားတွေနှင့် ဘာသာခြားအနောက်တိုင်းသားတွေရဲ့ပြုမူဆက်ဆံပုံကို အားလုံးကို သိစေချင်လို့ ပါ။ တကယ်တော့ ကာမာကူရဆင်းတုတော်ကြီးဟာ ဒီတိုင်းပြည်မှာ တည်ရှိသီတင်းသုံးနေပေမယ့်လို့တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အားလုံးနှင့် ပတ်သက်ပါတယ်။ ဆက်နွှယ်ပါတယ်။ ဘယ်တိုင်းပြည်၊ ဘယ်ဒေသကပဲဖြစ်ဖြစ် ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အထိမ်းအမှတ်၊ အဆောက်အအုံ၊ စေတီပုထိုး၊ ဆင်းတုတော်တွေအားလုံးကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမယ့်တာဝန်ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းရဲ့ တာဝန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအဖြစ်အပျက်ကို တတ်နိုင်သလောက် ကိုယ်နဲ့ နီးစပ်ရာအားလုံးကို သိအောင်ပြောပြပေးကြဖို့ကျွန်တော်မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် မြန်မာလူမျိုးမှရယ်မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံအသီးသီးက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အားလုံးကို သိစေချင်တာပါ။ နောက် ဒီကမှရှေ့ ဆက်ပြီး ဘာသာ၊ သာသနာကို အစော်ကားမခံရအောင် ဘယ်လိုမျိုး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ကျွန်တော်တို့ ထက် အတွေ့ အကြုံပိုများတဲ့ ရဟန်းပညာရှိတွေ၊ လူပညာရှိတွေ နှင့် တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းလို့အဖြေဆက်ထုတ်ပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ (oိမုတ္တိသုခ)
လူတစ်ယောက်သည် သူကိုယ်တိုင်အသုံးပြုနေသည့် မိုဘိုင်းဖုန်း ပေါက်ကွဲပြီး အသက်ပါပေးလိုက်ရသည့်သတင်းပင်တည်း။ ထိုကဲ့သို့ သတင်းမျိုးကို အရင်ကထဲက ဖတ်ခဲ့ဖူး၏။ ကြားခဲ့ဖူး၏။ သို့သော် ထိုအချိန်က မိုဘိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ရခြင်းမှာ မိုဘိုင်းကို အားသွင်းထားပြီး ကေဘယ်လ်ကြိုးတန်းလန်းနဲ့ စကားပြောကြခြင်းကြောင့်ဖြစ်၏။ ယခုဖြစ်ပျက်မှုမှာ မိုးဘိုင်းကို အားလဲသွင်းမထား ကြိုးတန်းလန်းနဲ့လဲ မဟုတ်ဘဲ အလွတ်ပြောနေရင်း ပေါက်ကွဲခြင်းဖြစ်လေသည်။ ယခုချိန်ထိ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့သည့်နိုင်ငံတို့မှာ တရုတ် တောင်ကိုရီးယား နီပေါနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ ဖြစ်ကြ၏။
အထူးသတိပေးလိုသည်မှာ ချာဂျင်လုပ်ရင်း မိုဘိုင်းကို အသုံးမပြုဖို့ပင်ဖြစ်၏။ ချာဂျင်သွင်းခြင်းသည် မုိုဘိုင်းထဲသို့ လျပ်စစ်ဓါတ်လွတ်ပေးခြင်းပင်ဖြစ်၏။ လျှပ်စစ်သည် မီးတစ်မျိုးဖြစ်၏။ မီးသည် ရန်သူမျိုးငါးပါးထဲမှ တစ်ပါးပင်ဖြစ်၏။ အမြဲတမ်းအန္တရာယ်ပေးနိုင်လေ၏။ (အားသွင်းရင်းတန်းလန်းမဟုတ်ဘဲ) အလွတ်အသုံးပြုလျှင်လည်း မိုဘိုင်းကို ရေမစိုစေဖို့အရေးကြီး၏။ ရေသည် မီး(လျပ်စစ်)၏ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်၏။ ရေနှင့်မီးပေါင်းစပ်မိခြင်းသည် အခန့်မသင့်က အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို ၀ုန်းဒိုင်း ပေါက်ကွဲစေတတ်၏။ ထို့ကြောင့် မိုဘိုင်းတိုင်းကို သတိထားပြီး အသုံးပြုစေချင်၏။ အသက်ကို ဥာဏ်စောင့်သည်မဟုတ်ပါလော။ ။ (ကိုကိုမောင်)
ဒေါက်တာအရှင်ရာဟုလာ တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာ စကားပြောနေ။
This dissertation provides an analytical and critical study of the Noble Ones through Buddhist canonical texts; it explores canonical methods and the perceptive views of modern scholars. After I have been long term worked of this project, it has been completed recently. For the accomplishment of this” A critical study of Noble Ones with reference to the main Pali literature”, I would like to extend my thankfulness to those who have helped this dissertation reach its fruition. Without their assistance, it is impossible to accomplish this study in time.
Seeing this academic writing progress, it is my great honor to thank those who madeanotable contribution and provided assistance in one way or another, for my academic study to reach its goal.First of all, I am highly grateful to my supervisor Dr. Rajashree Mohadikar (Lecturer, University of Pune, India), for spiritual kindness, encouragement, and her theoretical and practical expertise in the Buddhist literature and other fields. I have to express my gratitude to Prof. Kanchan Mande and Dr Shailaja Katre, (Head, Sanskrit Department, University of Pune) for her taking care of whatever necessary in offering official supports. I need to say thanks to Prof. Shailaja Bapat (Prof.University of Pune), who gave me good instructions and logical suggestions about this thesis, since I arrived in University of Pune. I must also acknowledge my gratitude to Prof. Dr. Deokar (Head of the Department of Pali, University of Pune) for his suggestions about the arrangement of my works. Without their assistance, my dissertation would not have reached its goal. And I wish to be grateful to all of my teachers, dhamma brothers, dhamma sisters, supporters and helpers.
I am further indebted in my gratitude to many Myanmar Buddhist Monks who have influenced me and my religious life, teaching me the best training for monastic education and training Buddhist studies tirelessly and guiding me different systems for meditation practice which are very important to develop my spiritual knowledge and right attitude to my life and my environment. Those Venerable monks are my first teacher U Nandamalar (Dhammacariya) Rambye, U Vimalacara (Tipitaka vinayadhara) Sasana Aye monastery, Yangon, U Silavamsabhivamsa (Sa-Ca-A-Siripavara dhammacariya, Pali paragu, professor of Vianaya department, and dhamma teachers from Kaba Aye sasana university) U Sumangala (Dhammacariya, Aung Myae Yadana, Yangon), U Nyanuttara Mahasantisukha missionary Centre, Tarmwe, Yangon, Chief monk U Pannavamsa (Penang Sayadaw, Malaysia &LA,USA), Sayadaw U Tilawka and Sayadaw U Sandavamsa, Burmese Buddhist Temple, Singapore, Mingun-Yangaon-Mandalay Tipitakadhara, Dhamma-bhandagarika,U Eindapala.
I wish to be grateful to Professors and lecturers from Buddhist and Pali University of Sri Lanka, Professors and lectures from University of Kalayaniya in Sri Lanka.
More especially, I am very grateful to my main supporter, Ms Melissa who supports my academic study financially, psychologically and spiritually. And I would like to give special thanks to Ms Jovena, Ms Pamela from Singapore, and devotees, those who deserve my heartfelt and spiritual appreciation. Without their support, generosity, kindness and encouragement, my academic study is impossible.
I wish to thank my parents, U Ba Sin and Daw Hla Yin Oo, my elder sister Daw Tin Myint, younger sister, Daw Myint Myint Wai, Daw Hla Hla Yee, Ko Tun Tun, Ma Aye Aye Maw, and my supporter, Daw Htwe and family from Malamying, Myanmar.And I wish to thank to Daw Tin Tin Myint, D.r Thet Thet New (Dana Sri lanka society), Dr. Khin Maung Gyi,(Brunai) who supported my academic study.
I am really grateful to all my Dhamma brothers, U Javana, U Kittibala, Rev Kim (Korean monk), U indacara ,U Kuvera, U Revada University of Pune, and Dhamma sister Daw Kesaracari, (B.H.U.) Banares, India for their kind hearted to me.
Finally, I would like to extend my gratitude to those members of Buddhist Community who support Buddhism in Singapore. They have helped to make the accomplishment of this undertaking comfortable. Last but not least, there are those whose kindness; encouragement, support, and devotion to my study are my deepest personal and spiritual inspiration. This dissertation would not have completed without the help of many other individuals, for which I am extremely grateful. I extend my sincere thanks to the office and the library staff of the Department of Sanskrit and Prakrit Languages, University of Pune, Pune.( Doctor Rahular)
University of Pune,India (12-12-2009) Posted by
WOH HUP company offered Waso Robes at Clementi Temple (15-08-2010)
ယနေ့ ko thaung kyaing and friends from Wah Hup Company celebrated Robe offering Ceremony at Clementi Temple.
စင်္ကာပူရောက်ဖူးသူတိုင်းလိုလိုဟာ Marina Bay ဆိုတဲ့ နေရာလေးကို ရောက်ဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီနေရာကိုရောက်ရင် မြစ်ပြင်ကျယ်ကို မြက်နှာမူပြီး တည်ဆောက်ထားတဲ့ စင်္ကာပူရဲ့ Monuments အဆောက်အဦးတွေရယ် ဒူးရင်းသီးကဇာတ်ရုံကြီးရယ် ရေကိုအမြဲ မှုတ်ထုတ်နေတဲ့ Marlion ရုပ်ရယ် လှပသန့်ရှင်းတဲ့ မြစ်ကမ်းတစ်လျှောက် နေထိုင်စရာနေရာတွေက တစ် သီးတစ်တန်းကြီးရှိပါလေရဲ့။
ဒူးရင်းသီး theater အပေါ်ထပ်မြစ်ခင်းပြင်နှင့် သစ်ပင်လေးအောက်ကအုတ်ခုံပေါ်မှာထိုင်ပြီး မြစ်ပြင်ကိုကြည့်ကာ လာရောက် လေညှင်းခံ လာနေသူတွေလည်း ရှိကြပါတယ်။ အထပ်တစ်ရာနီးပါးလောက်မြင့်တဲ့ မိုးပျံအဆောက်အဦးတွေကို နောက်ခံထားပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်နေကြတဲ့ အရွယ်သုံးပါး ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားများကိုလည်း တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်နေရပ်ဌာနေပြန်ရောက်တဲ့အခါ ဒီအဆောက်အဦးတွေနောက်ခံထားပြီး ရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို မရောက်ဖူးသေးတဲ့ သူတွေကိုပြပြီး အံ့သြစေမယ်စသည်ဖြင့် ရှိမှာပဲ။ National Day ဖြစ်တဲ့ Aug9ရက်နေ့ကဆိုရင် အဲဒီ marina bay ၀န်းကျင်ဟာ နတ်ပြည် တမျှပါပဲ။ အမေရိကန်ပိုင် Casino အဆောက်အဦးကြီးရဲ့ အပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ သင်္ဘောကြီးဟာ လူ ၅၀၀ ဆံ့ပါတယ်။ တချို့ စာဖတ်သူတွေ မတက်ဖူးသေးဘူးထင်ပါတယ်။ တက်ဖူးရင်တော့ congratultion ပါပဲ။ Nico high Wayနဲ့ အပြိုင်ဆောက်ထားတဲ့ Marina Bay ဖြတ်ကူး Steel စတားကြီးဟာလည်း ပိုက်ဆံကို ရေလိုသုံးပြီး ဆောက်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီ Nico high way တံတားရဲ့ အောက်ဘက်အနားက ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး flyer ရဟတ်ကြီးဟာ ဂျာမနီ ဗိသုကာတွေရဲ့ လက်ရာဖြစ်ပါတယ်။ မြင်နေရတဲ့ လူစီးတွဲတစ်ခုစီမှာ လူနှစ်ဆယ်ရှစ်ယောက်လောက်ဆံ့ပါတယ်။ တစ်ယောက်စီးခ $30 ပေးရမယ်။တပတ်ပြည်ဖို့အတွက် (၄၅) မိနစ်ကြာမယ်။ အဲဒီမြင်နေရတဲ့ Steel ကြိုးတစ်ချောင်းဟာ ၅ တန်ခန့်လေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။
စင်ကာပူရေမငတ်တော့ပြီ အဲဒီအောက်ဘက်ကို လှမ်းကြည်လိုက်ရင် ရေကာတာကြီးကို မြင်ရပါမယ်။ အဲဒီတာရိုးရဲ့ အနီးက အဆောက်အဦးတစ်ခုကိုလည်း တွေ့ရပါမှာပါ။ အဲဒါကို Marina Barrage လို့ ခေါ်ပါတယ်။စင်ကာပူကို ရေပေးဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေပါပြီ။စာဖတ်သူ မရောက်ဖူးသေးဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ညဘက်ဆိုရင် အဆောက်အဦးပေါ်က မြက်ခင်းကျယ်သို့ရောက်သွားရင် ရွှေစည်းခုံဘုရားပွဲ ရောက်နေသလိုပါပဲ။ မြက်ခင်းပြင်မှာစုပြီး ထိုင်သူတွေထိုင်၊ လှဲသူတွေလှဲ ကာလာစုံ စွန်လွှတ်သူတွေလွှတ်၊ သီချင်းတွေဆိုသူဆို၊ တီးသူတွေတီးနဲ့ပေါ့။ မကြာခင် အနန္တမေတ္တာအဖွဲ့ သွားဖို့ရန် ပြင်ဆင်နေကြပြီ။Driver Rajanတို့ David တို့နှင့် agreement ယူပြီးပါပြီ။
စင်္ကာပူမှ အရှည်ဆုံးမြေအောက် လမ်းမကြီး
ချမ်းမြစည်သာ ဆရာတော်ဦးသြဘာသကို ဟောင်ပါပြတိုက်မှာ တွေ့ရစဉ်
ကျား- ဆိုနောက်ဆုတ်၊ ကြောင်မဟုတ်၊ ခေါင်ချုပ်ထိပ်တမ်း၊ ကျားတံဆိပ်ဘမ်း။ ဘမ်း - တကာ့ခေါင်၊ စံပါယ်ချောင်၊ ယှဉ်အောင်သုံးစမ်း၊ ကျားတံဆိပ်ဘမ်း။
ပ -ရုပ်ဆ်ီတွေ၊ အသင်္ချေ၊ ယှဉ်လေသုံးစမ်း၊ ကျားတံဆိပ်ဘမ်း။ ရုပ်- ပျို ကိုယ်နု၊ ကျန်းမာမူ၊ ယခုသုံးစမ်း၊ ကျားတံဆိပ်ဘမ်း။
ဆီ- ဦးထောပတ်၊ ဓာတ်စုံစပ်၊ ထပ်ထပ်ရောပြွန်း၊ ကျားတံဆိပ်ဘမ်း။ (လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၆၀ခန့်က မြန်မာပြည်မှ ကြော်ငြာတစ်ခုကိုတွေခဲ့ရစဉ်) ချစ်စွာသော စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကို ဒီတခါတော့စကာင်္ပူရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာနေ၇ာတခုကို ခေါ်သွားလိုက်ပါတော့မယ်။ စာရေးသူနေထိုင်ရာ West Coast Road, Pasir Panjan Gardan, (No 23 .Jalan Mas Puteh) မှ Bus 30, 143, 51 တစ်ခုခုကိုစီးပြီး (၁၀) မိနစ်ခန့်သွားလိုက်ရင် How Pa Villa (ဟောင်ပါရဲအိမ်)ကိုရောက်ပါတယ်။တောင်ကုန်းမို့မို့လေးပေါ်မှာ ပြတိုက်ဥယျာဉ်ကြီးအဖြစ် ဖွင့်လှစ်ထားပါ တယ်။ ပိုင်ရှင်က မြန်မာ တရုတ်"ဟောင်ပါ "ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Bus ကားပေါ်က ဆင်းလိုက်ရင်ပဲ ကျားရုပ်ကြီးတွေကို ပထမဆုံးမြင်ရပါတယ်။ အထဲကိုဝင်သွားရင်လည်း free ပါပဲ။ ကြည့်ရူလို့မကုန်အောင် ရုပ်လုံး ရုပ်ကြွတွေ တောင်ကုန်းအနှံ့ပါပဲ။မြန်မာတို့အဖို့ ကျားဘမ်းပရုပ်ဆီ ဆိုရင် လူတိုင်းနီပါး သိလောက်ပါတယ်။ ဟောင်ပါသူဌေးကြီးရဲ့ သမီးတစ်ဦးနှင့်၊ သူမရဲ့သ္မီးဒေါ်သဂီခေါ် ဒေါ်မွှေး တို့ဟာ Clementi ဘက်မှာ သက်ရှင်နေထိုင်လျှက်ရှိပါတယ်။ စာရေးသူဆီကို မကြာမကြာ လာလည်တတ်ပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် တုန်းက ဒေါ်မွှေး တို့ဟာ မြန်မာပြည်မှာ သုံးနှစ်လောက် နေခဲ့တာဖြစ်လုိ့မြန်မာလိုတိုင်းရင်းသား တစ်ဦးထက် ပီပီသသ ပြောဆို နိုင်ပါတယ်။ သူ့မိခင်ကတော့မြန်မာအိမ်ဖော်တစ်ဦးနှင့်လက်တွဲပြီးနေလာတာ (၂၅)ကျော်လာခဲ့ပြီ လို့သိ ရပါတယ်။
ဒေါ်မွှေး(ခေါ်)ဒေါ်သဂီင်္င်္ဟာ ငယ်ငယ်က အင်္ဂလန်မှာ ကျောင်းနေခဲ့ပြီး အဲဒီမှာပဲ အိမ်ထောင်ကျကာ သားလေးတွေမွေးဖွားခဲ့ပြီး သူတို့လည်းအရွယ်ရောက်ကာ ဒေါ်မွှေးက စင်္ကာပူပြန်လာပြီး အခြေချနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သားတွေကတော့ အမေတရုပ်မကို သိပ်ဂရုစိုက်ပုံမပေါ်ကြပါဘူး။ဒေါ်မွှေးဟာ ဘာနှင့်တူလဲဆိုရင် ဘဲဥတွေကိုတာဝန် ယူပြီးဝပ်ပေးရတဲ့ကြက်မလိုပဲ။ကြက်မကသူဝပ်ပြီးမှ မွေးတဲ့ဘဲကလေးတွေကို နောက်က တစ်ကောက် ကောက်လိုက်ပြီး စောင့်ရှောက်ရှာတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘဲကလေးတွေက အသွင်လဲမတူတဲ့ကြက်မကိုဥပေက္ခာ ပြုထားကြတော့ နောက်ပိုင်းမှာ တဖြည်းဖြည်းပြတ်သွားကြပါတယ်။ ဒေါ်မွှေးမှာလည်း ကိုယ်မွေးခဲ့သားကလေးတွေကို သံယောဇဉ်ကုန်ပြီလို့ ဆိုပါတယ်။ တစ်နေ့က စာရေးသူရယ် ၊မေစိုးရယ် ၊ဟောင်ပါ ရဲ့မြေး ဒေါ်မွှေးရယ်၊bus စီးယင်း၊ လမ်းလျှောက်ယင်း How Pa Villa ကိုသွားလည်ကြသေးတယ်။
သူဌေးကြီးစီးခဲတဲ့ ကျားခေါင်းတံဆိပ်နှင့်လုပ်ထားတဲ့ ကားကိုပြတိုက်မှာပြထားတားတွေ့ရပါတယ်။ ထိုကားရဲ့ အနီ:မှာ ဒေါ်မွှေးရဲ့အမေ မြန်မာအမျိူးသမီးအဘွားအိုဓာတ်ပုံကို စင်္ကာပူအစိုးရက ချိတ်ဆွဲထားပါတယ်။ စာတန်းမှာတော့ဟောင်ပါသူဌေးရဲ့ သ္မီး ဟာ How Pa Villa ကိုနောက်ဆုံးလာလည်သွားစဉ် ဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးထားခြင်းလို့စာရေးထားပါတယ်။(ဆက်ရန်)
ငရဲပြည်နဲ့ နတ်ပြည်ဟာ ဘယ်လို ကွာလဲသိချင်ပါတယ်
(ချစ်သောစာဖတ်ပရိသတ်အတွက် story လေးတစ်ပုဒ်ပြောပြလိုက်ရပါသေးတယ်။)သူတော်ကောင်း တစ်ယောက်ဟာ တစ်ရက်တော့ ယမမင်းနဲ့ သွားတွေ့ပါတယ်တဲ့။ ကျွန်တော် မေးစရာ ရှိလို့ပါ။ ငရဲပြည်နဲ့ နတ်ပြည်ဟာ ဘယ်လို ကွာလဲသိချင်ပါတယ်
လို့ မေးတော့ ယမမင်းဟာ သူတော်ကောင်းကို တံခါး နှစ်ချပ်ဆီ ခေါ်သွားပါတယ်။ တံခါးတစ်ချပ်ကို ဆွဲဖွင့် ပြလိုက်တဲ့အခါ အထဲကို သူတော်ကောင်းက လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ မြင်ကွင်းက ရိုးရိုး ရှင်းရှင်းလေးပါပဲ။ အခန်းရဲ့ အလယ် ခေါင်မှာ စားပွဲဝိုင်းကြီး တစ်လုံး ရှိပြီး စားပွဲဝိုင်းကြီးရဲ့ အလယ်မှာ စားကောင်းသောက်ဖွယ် အိုးကြီးတစ်အိုး အပြည့် ရှိနေပြီး အနံ့တွေက မွှေးကြိုင်လွန်းလို့ အနံ့ရသူတိုင်းကို သွားရည်ယိုစေတာမို့ သူတော်ကောင်း လဲ သွားရည် ယိုမိ ပါတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် စားပွဲဝိုင်းမှာ မရွေ့တမ်း ၀ိုင်းထိုင်နေ ကြရတဲ့ လူတွေဟာ ပိန်လှီ ဖျော့တော့ လူမမာရုပ် ပေါက်နေကြ တယ်။ ဆာလောင် မွတ်သိပ် နေကြပုံလဲ ပေါက်နေသတဲ့။ သူတို့ရဲ့ လက်တွေကို အရိုးရှည်တပ် ဇွန်းတွေနဲ့ တွဲချည်ထား ခံထားရပြီး အဲဒီဇွန်းရဲ့ အရှည်ဟာ စားပွဲဝိုင်းကြီးအလယ်က စားကောင်းသောက်ဖွယ် အိုးကြီးဆီ ကောင်းကောင်း ရောက်နိုင်ပြီး ဇွန်းအပြည့် ခပ်ယူ နိုင်ကြ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ရဲ့ အရှည်ထက် ဇွန်းရိုးက တအားရှည် နေတော့ ဇွန်းထဲက စားစရာက ဇွန်းရှင်ရဲ့ ပါးစပ်ဆီ မရောက်နိုင် ဘူးပေါ့။ သူတို့ရဲ့ ဒုက္ခနဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို မြင်တော့ သူတော်ကောင်းလဲ လန့်ဖျပ် ကြက်သီးထ သွားပါသတဲ့။ ဒီတော့ ယမမင်းက ပြောပါတယ်။ ခု မင်းမြင်တာ ငရဲပါပဲ။
ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ ယမမင်းက နောက်တံခါး တစ်ချပ်ကို ဖွင့်ပြ ပြန်ပါတယ်။ အထဲကို ကြည့်လိုက်တော့ စောစော က အဖြစ်အပျက် အတိုင်း တထေရာတည်း မြင်ရ ပါတယ်တဲ့။ စားပွဲဝိုင်းကြီးရဲ့ အလယ်က စားကောင်း သောက် ဖွယ် အိုးကြီးထဲက အနံ့တွေဟာ သူတော်ကောင်းကို သွားရည်ယိုစေတယ်တဲ့။ စားပွဲဝိုင်းကြီးမှာ ၀ိုင်းထိုင် နေကြ တဲ့ လူတွေဟာ အရိုးရှည်တပ် ဇွန်းကြီးတွေ တွဲချည် ခံထားရတဲ့ လက်တွေနဲ့ ချည့် ဖြစ်နေပေမယ့် လူတွေ ကတော့ စောစောက အခန်းထဲက လူတွေနဲ့ မတူဘဲ ကောင်းကောင်း ၀၀လင်လင် စားသောက် ထားရလို့ အာဟာရ ပြည့်ဝ နေကြပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ရယ်မော စကားပြော နေကြပါသတဲ့။ ဒီတော့ သူတော်ကောင်းက ကျွန်တော်တော့ ဘယ်လိုမှ နားမလည် နိုင်တော့ဘူးလို့ ပြောတဲ့ အခါ ယမမင်းက ပြောပါသတဲ့။
ရှင်းရှင်းလေးပါကွာ.. အရည်အချင်းလေး တစ်ရပ်တည်းကြောင့် ခုလို ငရဲနဲ့ နတ်ပြည် ကွာသွားတာပါ။ ဒီအခန်း ထဲက လူတွေက သူတပါးကို အချင်းချင်းကို ဘယ်လို မျှဝေ ကျွေးမွေး ရမလဲ ဆိုတာကို စဉ်းစား နေကြချိန်မှာ အရင် အခန်းထဲက လူတွေက သူတို့ အတွက် ဘယ်လို ရအောင် စားရမလဲ ဆိုတာကိုပဲ စဉ်းစား နေကြပြီး လောဘတွေ ကြီးနေ ကြလို့ပါ…. တဲ့။( နှင်းရည်လွင် ပေးပို့သည်)
ကျွန်တော် အခုရေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးက ဆရာတော် အရှင်ဇ၀နရေးသားထားတဲ့ မျက်ရည်မကျခင် သိစေချင်ဆိုတဲ့ စာအုပ်မှကူးယူဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ မိမိတို့ရဲ့အဓိက ရည်ရွယ်ချက် ပန်းတိုင်ကိုသိစေချင်တဲ့စေတနာနဲ့ ပြန်လည်ရေးသားဖော်ခြင်းပါ စာအရေးအသား အနှစ်အရသာ ပျက်မှာစိုး၍ ဆရာတော် ရေးသားထားသည့်အတိုင်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ် ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ၏ ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်ကား မဂ်ဥာဏ် ၊ ဖိုလ်ဥာဏ်ကိုရကာ နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြု ရေးပင်ဖြစ်ပါ၏။လောက၌ဘုရားပွင့်တော်မူခြင်းကလည်း၎င်းရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်ပင်ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့်လည်းစလင်းကန်လယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးက……အိုလူများတို့ ၊ ဘုရားသခင်နှင့် ကိုယ်တိုင်မတွေ့လိုက်ကြရ၍ဘာ ၀မ်းနည်းစရာရှိသလဲ၊ ယခုအခါ ဓမ္မက္ခန္ဓာ ဘုရားတွေအများကြီး ရှိသေး၏ ။ကံ ၊ ပါရမီရှိလျှင် ရလိမ့်မည်ဟူ၍သာ အေးစက်စက်နေကြလျှင် အများကြီးနစ်နာကြလိမ့်မည် ။ စာမတက်လို့ ဘာမတက်လို့ လဲမလုပ်ကြပါနှင့် ၊ ဆရာကောင်းနှင့်တွေ့လျှင် ရနိူင်ပါသည် ။ သို့အတွက် အိုလူများတို့ ၊ ယခုအခါ ကံ ပါရမီကိုမေးရန် မလိုပါ ။ ရှင်ဘုရင်သားဖြစ်ပြီးအိမ်ရှေ့မင်းသားသည် ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ရန် ဗေဒင်မေးဖို့မလိုပါ ။မုတ်ဆိတ်ပျားစွဲသူသည် တခြားသွားပြီးပျားဖွတ်ရန်မလို ၊ရန်သူဝိုင်းထားခံရသူသည် ထွက်ပေါက်သိလျက်နဲ့ မထွက်သော် ၊
ကံပါရမီချဖွယ်မလို ၊ အညစ်အကြေးလူးသူသည် ရေစင်ရှိလျက်မဆေးသော်ရေ၌အပြစ်ဆိုဖွယ်ရာမလို ၊ မိမိကသာဖျင်းလို့ ၊ အ လို့ န လို့ ဖြစ်သည် ။ အသေနည်းသေးတယ်လို့သာ ဆိုဖွယ်ကောင်းတော့၏ ။ ကြောက်ကြ ၊ လန့်ကြ ၊ ထိတ်ကြ ၊ အိုလူများတို့ ၊ သို့အတွက် တရားအားထုတ်ကြပါကုန်လော့ ။ဟူ၍ မဂ်ဥာဏ် ဖိုလ်ဥာဏ်ရကြောင်းလမ်းဖြစ်သည့် ၀ိပဿနာတရားကို အားထုတ်ကြရန် အရေးတကြီး တိုက်တွန်းတော်မူခဲ့ပါသည် ။ မဂ်ဥာဏ် ၊ ဖိုလ်ဥာဏ်ရဖို့ အားထုတ်ခြင်းမှာ ရလာသော လူ့ဘ၀မှ အနှစ်သာရထုတ်ခြင်းတစ်ခုပင် ဖြစ်၏ ။
ထိုကဲ့သို့ အနှစ်သာရထုတ်ချင်လာဖို့ရန် ရှေးဦးစွာ လူ့ဘ၀တန်ဖိုး ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရခြင်း၏ တန်ဖိုးတို့ကို သိရန်လိုအပ်ပါသည် ။
အများသိကြတဲ့အတိုင်း သိပ်ပြီးအချိန်ဆင်းရဲတဲ့ ဂျပန်နှင့်စင်္ကာပူလိုနိုင်ငံများမှာနေတဲ့လူတွေ ဟာသိပ်အား တယ်မရှိကြပါဘူး။မကြာခင်ကမွေးဖွားလာခဲ့သောဇယမင်္ဂလာဗုဒ္ဓဝိဟာရမိုးကုတ်ဝိပဿနာ ရိပ်သာဟာ ယခုအခါတကယ်ပဲသက်ဝင်လှုပ်ရှားလာခဲ့ပါတယ်။ပြောသလိုလုပ်တတ်ကြတဲ့အနန္တမေတ္တာ အင်အားစုတွေ ကလည်းတက်ကြွနေကြပါတယ်။မိမိတို့ရဲ့ဒေါက်တာရာဟုလာဟာနားတယ်လို့မရှိလောက်ပါပဲ။နိုင်ငံပေါင်းများ
မလေးရှားကျောင်းဖွင့်ပွဲတော်ကိုစည်ကားစွာကျင်းပခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ရန်ကုန်ဇယမင်္ဂလာဗုဒ္ဓဝိဟာရကိုလည်း တပည့်များနှင့်လက်တွဲကာ ဖွင့်လှစ်ပြီး ပုံမှန် လည်ပတ်လျှက်ရှိပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာတော့ စင်္ကာပူဇယမင်္ဂလာမိုးကုတ်ဝိပဿနာ ဓမ္မရိပ်သာအဖြစ်သက်ဝင်လှုပ်ရှားလာခဲ့ ပါတယ်။စနေ၊တနင်္ဂနွေ၊တနင်္လာသုံးရက်တောင်Holidaysဆိုတော့တရားစခန်းသုံးရက် စီစဉ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဦးဆောင်တရားပြပေးခဲ့တဲ့ မိုးကုတ်သား မန္တလေးမိုးကုတ်ရိပ်သာဌာနချုပ်မှ ဆရာတော်ဦးပညာစက္ကလည်းတရားဟောတော်တော်ကျွမ်းကျင်ပါတယ်။ဥပဓိရုပ်ကောင်းပြီးအေးချမ်း ပါတယ်။
တနင်္ဂနွေနေ့ကတော့ စင်္ကာပူ၊အမေရိကန် အခြေစိုက်သာသနာ့ဒါယကာ ကိုအောင်ပြည့်စုံသာသနာ့ ဒါယိကာမ မမိုးမိုးစံတို့ဦးဆောင်ပြီး ဒေါက်တာအရှင်ရာဟုလာကို သိမ်ထပ်ကံဆောင်၊ သိက္ခာထပ်ပွဲတော်
ကျင်းပလိုက်ကြသေးတယ်။ ဒီနှစ်ကတော့ရာဟုလာရဲ့ ထူးခြားတဲ့နှစ်လို့ပြောရမှာပါ။ စေတနာကောင်းတဲ့ ရာဟုလာအတွက်လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာ အတော်များများလုပ်နိုင်ပါ တယ်။ စင်္ကာပူမှာဘာတွေအခက်အခဲတွေရှိပါသလဲ?လူငယ်တွေအကြားရေပန်းစားနေတာတစ်ခုက ကလင်မတီကျောင်းရောက်ပြီးယင် အဆင်ပြေသွားကြ တယ်ဆိုပဲ။ သူတို့ပြောမယ်ဆိုလဲ ပြောသင့်တာပါပဲ ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အလုပ်ရှာဖို့လာတဲ့ မြန်မာတွေအဖို့ E Visa လျှောက်ရင် 9,weeks ရမယ်။ စင်္ကာပူလေဆိပ်ဖြတ်ပြီးယင် Stay permit(30) days ရမယ်။ နှစ်ပတ်ကျော်လောက်နေပြီးယင် Online ကနေ Stay Visa တိုးလို့ရတာများပါတယ်။
တစ်ချို့တစ်လေကျတော့ Reject ထိတာနဲ့ မလေးရှား ဗီဇာအမြန်လျှောက်ထားရတယ်။ ဗီဇာလုပ်ဖို့သွားယင် Penisula Plaza တတိယထပ်မှ မဇာဇာဆီသို့သွား၊ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ၊E-Visa မိတ္တူငွေ$25 တပါတည်းယူသွားရတယ်။ ပေးတဲ့နေ့နှင့် ရုံးပိတ်ရက်ကို နှုတ်ပြီး လေးရက်အနည်းဆုံးကြာမှ မလေးဗီဇာရမယ်။ မြန်မာပြည်ကရောက်လာတဲ့ Visit-Visa ကိုင်သူတစ်ဦးအနေနဲ့ မလေး ဗီဇာ(၁၄) ရက်ပဲရပါတယ်။ ရက်(၉၀)အတွင်း ဘယ်နေ့ပဲဝင်ဝင် တစ်ကြိမ်သာဝင်ခွင့်ရှိတယ်။ (၁၄)ရက်ရမယ်။ အဲဒီတော့ ဆွေမျိုးရင်းချာ အသိမိတ်ဆွေမရှိတော့လဲ မြန်မာတွေစိုးရိမ်ကြတယ် ။ တကယ်လဲကြောက်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် စင်္ကာပူဗီဇာ မကုန်ခင် အလုပ်ရအောင်ရှာကြရပါတယ် ။
စင်္ကာပူအလုပ်ရှာနည်းနံနက်စောစောသတင်းစာဖတ်လျှင် အလုပ်ခေါ်ကြော်ငြှာကိုဖတ်ပြီး ကပ်ကြေးနှင့်ဖြတ်ကာမိမိNote bookမှာကပ်ထား ။ ပြီးရင် Emailနဲ့ နံနက် (9:AM) မတိုင်မီ ပို့ပေးရလိမ့်မယ်။ CV-Form မှာဓာတ်ပုံလှလှလေးကပ်၊ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အကယ်၍ အင်တာဗျူးရယင် ဘယ်ကုမ္ပဏီက ခေါ်တယ်ဆိုတာ သိဖို့သိပ်အရေးကြီးတယ်။ ပြီးနောက် Biography ရယ် Education background ရယ် Experiencesတွေ Responsibilityတွေ များများထည့်ပေးပါ။အင်တာဗျူးရဖို့တော့ Clementi ကျောင်းမှာ
ဆုတောင်းလိုက်ယင် အဆင်ပြေမှာပါ။အင်တာဗျူးရရင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါ။ လှလှပပ ဝတ်စားဆင်ယင်ပြီး စတိုင်ကျကျသွားဖို့သတိပြုပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာပလိပ်ကအစ၊သရုပ်ဆောင်မင်းသား၊မင်းသမီးလိုပဲအလေးထားပြီးဝတ်ဆင်ကြတယ်။သိပ်ပြီးတော့လဲ အလှအပနဲ့အသန့်အရှင်းကို ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံပါပဲ။ ပြောတတ်ဆိုတတ်ဖြစ်အောင်တော့ သီးသန့်လာ ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ငါ့အင်္ဂလိပ်စကားက သိပ်ကောင်းတယ်လို့ သိပ်ပြီး Over estimate မလုပ်ပါနဲ့။ သိသင့်တာတွေ တစ်သီးတစ်တန်းကြီးကျန်သေးတယ်။တချို့ကြတော့ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေလို့ စိတ်ပျက်ပြီး ပြန်ဖို့လေ ယာဉ်လက်မှတ် Date တပ် (သို့) booking လုပ်ပြီးမှ ကလင်မတီကျောင်းရာက်လာပြီး အလုပ်တွေအဆင်ပြေသွားကာ (PR)ကျလို့ ကျောင်းမှာ မင်္ဂလာဆွမ်းအပတ်စဉ်လိုလို ကပ်နေကြပါတယ်။
အတိတ်ကုသိုလ်ကံ အားနည်းလို့ အလုပ်အဆင်မပြေဘဲ ကိုယ်ဆင်းရဲ စိတ်ဆင်ရဲခံကြရမည့် သူတွေအတွက် ဆင်းရဲဒုက္ခ၊ဘေးအန္တရာယ်ကို တားဆီးရန် ရည်ရွယ် ပြီး ဂျိုဟိုးမှာ ဇယမင်္ဂလာဗုဒ္ဓဝိဟာရကိုတည်ထောင်ဖွင့် လှစ်ထားပါတယ်။မလေးကိုသွားလို့ရှိရင်ကျောင်းကို ရှာလို့ရအောင်မလေးရှားဖုန်းSin-card နဲ့အတူ အမြန်ရောက်သွားအောင် Taxi ခတောင်ပေးလိုက်ပါသေးတယ်။
ရန်ကုန်က ပထမယူလာတဲ့ E-Visa ကုန်ခင် အနည်းဆုံးနှစ်ရက်သုံးရက်လောက်မှာ Singapore ကိုကပ်ပြီးဝင်လာဖို့လိုပါတယ်။ ယုတ္တိရှိအောင် ရန်ကုန်ပြန်မည့် လေယာဉ်လက်မှတ်နှင့် ရက်စွဲကိုတော့ တိတိကျကျပြန်ဆင်ထားပါ။ white card မှာ တောင်းထားတဲ့ရက်နှင့် စင်္ကာပူမှထွက် ခွာမည့် လေယာဉ်လက်မှတ် (foreshow) တို့ကိုက်ညီဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီအချက်ကို အထူးသတိထားကြပါ။
Show money မေးရင် ပြနိုင်အောင်လည်း စင်္ကာပူဒေါ်လာ (200/300 )လောက်တော့ဆောင်သွားလိုက်ပါ။ အင်မဂရေးရှဲင်းရောက်ရင်ရုပ်လည်းချောသဘောကောင်းမယ်လို့ထင်ရတဲ့တရုတ်မဆီကို ရွေးပြီးဝင်ကြည့် လိုက်ပါ။ တရုတ်မ ညစ်ရင်တော့ ကိုယ့်ဝဋ်ကြွေးလို့တော့မှတ်ပါ။
ဒီတစ်ကြိမ်ရတဲ့ဗီဇာနဲ့ မီးကုန်ယမ်းကုန်ဂျိုဟိုးမှာStayရှောင်နေတုန်း သူငယင်ချင်းတွေဆီ CV လှမ်းပို့တာတွေ၊ ကလင်မတီကျောင်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ ဆရာတော်ဒကာ၊ဒကာမတွေက ဆက်စပ်ပေးလို့ဖြစ်စေ၊အလုပ်ရနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ဒီတစ် ခေါက်ရလာတဲ့ ဗီဇာလေးနှင့် အပိုင်သာတွယ်ပေတော့။ ဒီတစ်ကြိမ်ကတော့ ဗီဇာတိုးလို့ရဖို့ဆိုတာ သိပ်မသေချာတော့ဘူး။ နဲနဲခက်ခဲသလိုခံစားရရင် မလေးဗီဇာ ပြန်လုပ်ရင် လုပ်ထားပါ။ စီမံခန့်ခွဲမှု့လိုသွားလို့ မလေးကိုလည်းထွက်ဖို့ဗီဇာမယူလိုက်ရရင် ရန်ကုန်ပြန်ဖို့ကျတဲ့သူတွေအတွက် အနန္တမေတ္တာတို့က ရန်ကုန်မြို့မှာနေဖို့ထိုင်ဖို့၊ စီစဉ်ပေးလိုက်ပါသေးသည်။ နောက်ထပ် စင်္ကာပူပြန်လာဖို့E-Visaလှမ်းပို့ရ တာလည်းမနည်းတော့ပါ။
စင်္ကာပူပြန်ရောက်တော့အနေလဲကြာလာ၊ ကိုယ့်မြို့ကိုယ့်ရွာလိုဖြစ်လာပြီး အလုပ်လည်းရ အခြေလည်း ကျသွားတော့မှ လူရည်လည်ကာ စင်္ကာပူမှာ ကိုရောင်ဖျောက်သွားကြတဲ့သူတွေလဲ မနည်းတော့ပါဘူး။ အနန္တ မေတ္တာတို့ကတော့ ဆက်ပြီးမေတ္တာပို့လျှက်ရှိပါတယ်။
Retrench မှာပါသွားပြန် နှစ်တွေလည်းအတော်ကြာတော့ အနေကျပြီးလောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟလေးတွေ ကိုယ်စီနှင့်"ခိုင်"သွားပြီလို့ထင်ထားခဲ့ပေမယ့် လောကနိယာမအရ ဘယ်အရာမှကြာကြာမခံ။ အကြောင်းစုံရင်ဖြစ်သွားတယ်၊ အကြောင်းကုန်ရင်ပျက်သွားတယ်ဆိုသလိုသူတို့ကလေးတွေRetrench(အလုပ်ဖြုတ်ခံရသူ)တွေထဲမှာပါသွားတဲ့အခါ မဝံ့မရဲနှင့် အသာလေး ကျောင်းဘုရားခန်းမှာ ရောက်နေကြပြန်ပါတယ်။ ခုတစ်လောတော့ ဒီကိစ္စတွေအတွက် အနန္တမေတ္တာတို့ အမြန်ဆုံး မီးကုန်ယမ်းကုန် စီစဉ်လျှက်ရှိပါတယ်။
(ဆက်ရန်ရှိသေးသည် မျှော်ပါ )
ယနေ့ စင်္ကပူနိုင်ငံ ဇယမင်္ဂလာဗုဒ္ဓဝိဟာရကျောင်းတိုက် ဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်ရာဟုလာအား အမေရိကန်နိုင်ငံမှ ဒါယကာ ကိုအောင်ပြည့်စုံ+ဒါယိကာမ မမိုးမိုးစံနှင့် မိသားစု ဆွေမျိုးများက သာသနာပြုသိမ်ထပ် (သိက္ခာထပ်)မင်္ဂလာကိုကျင်းပကြရာ ကြွရောက်လာကြသော ချမ်းမြစည်သာဆရာတော်ဘုရားကြီး၊ မန္တလေးမြို့ မိုကုတ်ရိပ်သာဌာချုပ်မှဆရာတော်ဦးပညာစက္ကနှင့်သံဃာတော်များ ကျောင်းတိုက်ရှိ သာသနာ့ပါလပါသာဒသိမ်တော်မြတ်အတွင်းသို့ စုရုံးကြွရောက်လာကြသည်။ အလှူဒါယကာမိသားစုများ၊ ပါရမီရှင်ဂုဏ်သရေရှိလူကြီးလူကောင်းများ၊ ပညာတတ်အသိုင်းအဝိုင်းများ၊
ကျောင်းတိုက်သာသနာ ပြုလုပ်ငန်း၏ပင်တိုင်အလှူရှင်များ၊ ဝေယျာဝစ္စအဖွဲ့ဝင်များ
အခမ်းအနားအစီအစည်အရ (၁) နမောတဿ(၃)ကြိမ်ရွတ်ဆို၍အခမ်းအနားကိုဖွင့်လှစ်ကြသည်။
(၂)မန္တလေးမြို့မိုကုတ်ရိပ်သာဌာနချုပ်မှဆရာတော်ဦးပညာစက္ကမှသရဏဂုံသုံးပါးနှင့်ငါးပါးသီလကို ချီမြင့်တော်မူသည် ။
(၃) ဥပသမ္ပဒကံဆောင် ကမ္မဝါစာများကို ရွတ်ဖတ်ချီးမြင့်တော်မူကြသည်။
(၄)သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်များက အလှု့ရှင်မိသားစုနှင့်သတ္တဝါနေယျတို့ ချမ်းသာစေရန်မေတ္တာသုတ်ကို ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြသည် ။
(၅)ကြွရောက်လာကြသောပါရမီရှင်များက လှူဒါန်းဖွယ်ရာများဖြင့် သံဃာ့ဒါနလောင်းလှူပူဇော်ကြသည် ။
(၆) မိုးကုတ်ဆရာတော် ဦးပညာစက္ကမှ အမေရိကန်မှရောက်ရှိလာသော ရဟန်းဒါယကာ မိသားစု များအား အနုမောဒနာတရားချီးမြင့်ပြီး လှူဒါန်းအပ်သော ဇယမင်္ဂလာဗုဒ္ဓဝိဟာရဘုရားကြီးစံတော်မူရာ ပလ္လင်တော်နှင့် သိမ်ထပ်မင်္ဂလာ ကုသိုလ်ကောင်းမှု့တို့ကို ရေစက်သွန်းချကာ အမျှ ပေးဝေကြသည်။
(ရ)ဆရာတော်များနှင့်ပါရမီရှင်များစုပေါင်းကာ ဓာတ်ပုံရိုက် မှတ်တမ်းတင်ကြသည်။
(၈)ပြီးနောက် ဗုဒ္ဓသာသနာစိရံတိဋ္ဌတု(၃)ကြိမ်းရွတ်ဆိုကာ အခမ်းအနားကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ကြသည် ။
(၉)ဆက်လက်၍ မြန်မာရိုးရာမုန့်တီမျိုးစုံ၊ဒန်ပေါက်ဆွမ်း၊ မြန်မာထမင်းဟန်းများဖြင့်ဧည့်ခံ ကျွေးမွေး
သိက္ခာထပ် အလှုတော်မင်္ဂလာ ဖိတ်ကြားလွှာ
ကျနော်၊ကျမတို့သည်သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲမှထွက်မြောက်ရန်လည်းကောင်း၊ စေတီပေါင်း ရှစ်သောင်း လေးထောင်၊ကျောင်းပေါင်းရှစ်သောင်းလေးထောင်၊ရေကန်ပေါင်းရှစ်သောင်းလေးထောင်လှုဒါန်းသော် လည်း သာသနာ့ဒါယကာမမည်။ မိမိတို့သားကိုလည်းကောင်း၊ သူတစ်ပါးတို့၏သားကိုလည်းကောင်း သာသနာ့ဘောင်ကို သွတ်သွင်းချီးမြှောက်မှသာလျှင် သာသနာ့ဒါယကာအစစ်ဖြစ်နိုင်၏ ဟူသော ဗုဒ္ဓဘာသာထုံးတမ်းစည်လာအရ စင်္ကာပူနိုင်ငံနေ အလှုဒါယကာ ကိုအောင်ပြည့်စုံ+ အလှု့ဒါယိကာမ မမိုးမိုးစံ မိသားစုကဇယမင်္ဂလာဗုဒ္ဓဝိဟာရ(စင်္ကာပူ)၊ ဇယမင်္ဂလာဗုဒ္ဓဝိဟာရ(မလေးရှား)၊ ဇယမင်္ဂလာဗုဒ္ဓဝိဟာရ(ရန်ကုန်) ကျောင်းတိုက်များ၏ နာယကချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာအရှင်ရာဟုလာ (ဆရာတော်အရှင်ဝိစိတ္တ)အား သိက္ခာထပ်အလှုတော်မင်္ဂလာကို အောက်ပါအစီစဉ်အတိုင်း ကျင်းပမည် ဖြစ်ပါသော ကြောင့် ဆွမ်းစားတရားနာ ကြွရောက်ကြပါရန် ခင်မင်ရင်းနီးစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည် ။
အစီအစဉ်နေ့ရက် ။ ။ 09 ,08 , 2010 Monday( ၁၃၇၂ ဒုတိယဝါဆိုလဆုတ် ၁၄ ရက် )
အချိန် ။ ။ နံနက်(၉) နာရီမှ (၁၀)နာရီ
နေရာ ။ ။ သာသနာ့ပါလ သိမ်တော်၊ ဇယမင်္ဂလာဗုဒ္ဓဝိဟာရ (Clementi ကျောင်း)23,A Jalan Mas Puteh, Along west coast Road, Singapore 128628Tel: 6778 1678, 81230769
Clementi MRT အနီး NTUC- မှတ်တိုင်မှ Bus 78 , 285 ကိုစီးပြီး ဒုတိယ မှတ်တိုင်(BLK 701) Esso ဓာတ်ဆီဆိုင်မှာ ဆင်းပါ ။
ယနေ့ ဆွမ်းအလှူရှင်များအား ဇယမင်္ဂလာဗုဒ္ဓဝိဟာရကျောင်း၌ တွေ့ရစဉ်
ယနေ့ တင်္ဂနွေနေ့၌ ဇယမင်္ဂလာဗုဒ္ဓဝိဟာရကျောင်းတိုက်တွင်ဆွမ်းအလှူရှင်များဆွမ်းလာရောက်ဆက်ကပ်ကြသည်။ များပြားလှစွာသောစားသောက်ဖွယ်ရာများကိုပျော်ရွှင်စွာစားသောက်ပြီး တရားနာယူနေကြသည်ကိုတွေ့ရှိရသည် ။
ဇယမင်္ဂလာဗုဒ္ဓဝိဟာရ( ပထမနေ့) တရားစခန်းကိုတွေ့ရစဉ်
ယနေ့ဝါတွင်းသုံးလတရားစခန်းကိုစတင်ကျင်းပလျှက်ရှိရာအခမ်းအနားအစီအစဉ်အရနမောတဿ(၃) ကြိမ်ရွတ်ဆိုပြီးအခမ်းအနားကိုဖွှင့်လှစ်ကြသည်။ထို့နောက်ကျောင်းတိုက်များ၏နာယကချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာအရှင်ရာဟုလာကအဖွင့်အမှာစကားပြောကြားသည်။ဆက်လက်၍ကမ္မဋ္ဌာနစရိယဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တပညာစက္က(မန္တလေးမိုးကုတ်ရိပ်သာဌာနချုပ်)ကအလုပ်ပေးတရားများစတင်ဟောကြားပြီဖြစ်ပါတယ် ။ စနေနေ့ဆိုတော့တစ်ချို့ယောဂီတွေဟာကျောင်းတိုက်ကိုရှေ့ရှု့ပြီးလာနေကြပြီဖြစ်ပါတယ် ။
AYE ခေါ် (Ayar Raja Express) လမ်းမကြီးရဲ့ဘေး Bukit Timah ဧရိယာ၊ တောင်ကုန်းလေးပေါ်မှာ တည်ရှိတဲ့ ထိုင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဗောဓိပင်နှင့် မြန်မာမှု့လက်ရာ စကျင်ကျောက်နှင့် ထုလုပ်ထားတဲ့ စကျင်ကျောက်ဘုရားကြီးတစ်ဆူ၊ကျောင်တိုက်၊ ကျောင်းဆောင်တွေက သပ်ရပ်လှပါတယ်။ တကယ်စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဝင်တို့ လေ့လာစရာလေးတစ်ခုပါ ။
(၁၂) Mount favour Sentoza ကို ကယ်ဗယ်ရထားနှင့် ဖြတ်ကျော်ကြတဲ့ တောင်ကုန်းလေးကို မောင့်ဖေဗာလို့
ခေါ်ပါတယ်။ နံနက်စောစော လမ်းလျှေက်လို့ အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။ ကွေ့ပတ်ထားတဲ့
လမ်းလေးတွေ တစ်လျှောက်ကျန်းမာ ရေးလိုက်စားရန် သင့်တော်ပါတယ်။
(၁၃) Handason WaveHandaason Read ပေါ်မှ တောင်ကုန်းနှစ်ခုကို ဖြတ်ပြီး ထိုးထားတဲ့ သစ်သားတံတားကြီးဖြစ်ပါတယ် ။
အတော်မြင့်မားပြီး လမ်းလျောက်သူတွေနဲ့စည်ကားနေတတ်ပါတယ် ။
(၁၄) Clementi west wood ပန်းခြံWest coast Road, West Coast Plaza အနီးရှိ တောင်တန်းလေးတစ်လျောက် သစ်ပင် ပန်းမာန်
များစွဖြင့်လမ်းလျှောက်လို့အင်မတန်ကေင်းတဲ့ နေရာလေး တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။Clementiကျောင်းမှ ဘုန်းဘုန်းတွေနံနက်တိုင်းလိုလို လမ်းလျှောက်တဲ့ နေရာလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ။်
ဂျပန် စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုလည်းရှိတယ် ။
Penisula Plaza အနီး Funan ဘက်မှ ရှေ့ဆက်သွားရင် High Street Plaza ကိုရောက်လိမ့်မယ်။
အဲဒီမှာ ပစ္စည်းအများစုကိုလျော့ဈေးနဲ့ ရနိုင်ပါတယ်။
(၁၆) Nirajan shopအီလက်ထရွန်နစ်အသုံးအဆောင်များကို 30% လောက်လျော့ရောင်းပေးတဲ့ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဟာ Farer Park MRT, Race course Road , အမှတ် 185 ဟုထင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာတွေအသုံးတည့်တဲ့ Sony Camera 14.1 ကို $200 နဲ့ရနိုင်တယ် ။ Handset လေးတွေလည်း$130လောက်ပေးရင် ကောင်း ကောင်းရနိုင်တယ် ။ (ဆက်ရန်)
မလေးရှားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းမှာ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို နေရပ်ပြန်ပို့ဆောင်းခြင်း ကွာလာလမ်ပူ-မြန်မာသံရုံး။ ၂၀၁၆ သြဂုတ် ၃ ရ...